मार्सिधानको संरक्षण सहित विकास निर्माणको गोरेटो कोरेका छौ : अध्यक्ष नवराज न्यौपाने — Breaking News, Headlines & Multimedia
नेत्र शाहीआषाढ १४, २०७८जुम्ला,
मार्सी धानको उदगम स्थल, पर्यटकीय केन्द्र तातोपानी, गिरी दह सहित महत्वपूर्ण पर्यटन सम्भावना रहेको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने कोरपाटीका प्रधानसम्पादक तथा सञ्चालक नेत्र शाही सँग लिनुभएको अन्तरवार्ता सम्पादित अंश :
१. स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षको अवधिमा के के काम गर्नुभयो ?
स्थानीय तह स्थापना भएको चार बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाई, विधुत, खानेपानी, सिचाई, भौतिक पूर्वाधारका थुप्रै कामहरु भएका छन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय र भौतिक साधनले परिपुर्ति गर्न हाम्रो गाउँपालिकाका २८ वटा विद्यालयका भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, घेरवार निर्माण र फर्निचर उपलब्ध गराएका छौ । कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजालाई स्थानीय रैथाने खाना प्रयोग गरेका छौ । खस भाषाको संरक्षण गर्न, भेषभुषा संरक्षण गर्नका लागि कक्षा ५ सम्म खसभाषाको पाठ्यक्रम बनाएका छौ । शिक्षालाई एकरुपता ल्याउन बार्षिक परीक्षा गाउपालिकाले संचालन गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रथामिकता दिएर हिम शिखर मा.वि तातोपानीमा डिप्लोमा एग्रिकल्चर, दुर्गा मा.वि लाम्रा र कालिका मा.वि ताम्तिमा १८ महिने कृषि जेटिए शुरु गरेका छौ । प्रअ घुम्ति वैठक संचालनमा ल्याएका छौ ।
प्रत्यक स्थानीय तहमा एक एक वटा नमूना स्याउ तथा ओखर वगैचा स्थापना गरेका छौ । रैथानेवालीको संरक्षण गर्न विउवैंक स्थापना गरेका छौ । कालिमार्सीको संरक्षण गर्न उदगमस्थल लाक्षु ज्यूला यहाँ भएकाले हरेक जेठ ३० लाई रोपाई दिवश मनाउने गरिएको छ । सिचाईमा निर्माण कुला मर्मत गर्नुका साथै रिर्जव पानी ट्यांकी बनाएर सुख्खा समयमा सिचाई गर्ने गरिएको छ । लिप्ट सिचाई थोपा सिचाई, थोपा सिचाई, हिम पोखरी, वाढि पहिरोवाट बच्न नियमित रोकथाम जस्ता कामहरु सचालन गरिएका छन् । स्वास्थ्यमा गाउँपालिकाका ४ स्थानमा वर्थिङ सेन्टर, आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र र उपकरण व्यवस्थापन गरि संचालनमा ल्याईएको छ । ६० बर्ष माथीका ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलो स्वास्थ्य अभियान थालिएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वंसेविकाहरुलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । विशेष गरी कोरोना भाईरस सँगको लडाईमा गाउँपालिकामा ५ वेडको कोभिड अस्पताल संचालनमा रहेको र २० वेडको तयारी रहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाबाट जाजरकोट जोड्ने सडक निर्माण र सिञ्जा गाउँपालिका सँग जोड्ने वाटो निर्माण भईरहेको छ । गाउँपालिकाका ३१ गाउँमा सडक पु्र्याएका छौ । यसैगरी जुम्लाको बृहत खानेपानी आयोजना १ प्रतिशत साझेदारी गरेर तातोपानीमा एक घर एक धाराको विकल्प ल्याएका छौ । यसैगरी यसपालिकाको गिडिखोला जलविधुत १४४ किलोवाटको काम सम्पन्न भएको छ । डाँगीवाडामा हावावाट बिजुली निकाल्ने कामको अध्ययन गरिएको छ । समग्रमा रणनितिक योजना, गुरुयोजना, बार्षिक योजना बनाई समग्र कामको योजना वैंक स्थापना गरि सूचारु गरिएको छ ।
२. अहिले सम्मको काम गराईबाट के कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पहिलोपटक संघीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष जनता सँग साक्षात्कार गरेर जनताका आवश्यकताहरु सँग घुलमिल हुन पाएकोमा खुशी नै छु । सिमित स्रोत साधनमा सिमित जनातको आवश्यकता पुर्ति गर्न जत्तिकै चुनौतिपूर्ण रहेको छ । बर्षौ देखी जनअपेक्षामा चाङ लागेर बसेका तमाम समस्यालाई एकैचोटी सामाधान गर्नु आकाशको फल आखाँतरी भर भने जस्तै भएको छ । जनताको चाहाना र हाम्रा सिमिति स्रोतको वाध्यता विचका अन्तर विरोधहरुले मन खिन्नता हुन्छ । स्रोत साधन कम भएकाले हामीलाई जनताका सवै आवश्यकता परिपुर्ति गर्न कठिन छ । भित्रि ईच्छा र आवश्यकता हुदा हुदै व्यवहारमा केही समस्या छ । आवश्यकता सँगै पौठेजोरी खेल्न पाउदा आगामी दिनमा जनताका आवश्यकता पुर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा नयाँ ज्ञान हासिल भएकाले म सन्तुष्टिनै छु ।
३. यो तीन बर्षमा कति बजेट खर्च भयो ? बजेट खर्च अनुसारको उपलव्धी हासिल भयो ?
ततोपानी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ आम्दानी रु ३१ करोड ४९ लाख ९१ ह्जार ८ सय ७३ रुपैया र खर्च २७ करोड ७५ लाख ६९ हजार ७५० रहेको थियो । आ.व. २०७५।०७६ मा आम्दनी ३५ करोड ९७ लाख १२ हजार आठ सय ८४ र खर्च ३२ करोड २४ लाख ७९ हजार ४८१ रहेको छ । सोही तुलनामा ०७६।०७७ र ०७७।०७७ हुन पुग्ने देखिन्छ । सोच अनुसारको काम नयाँ सरकारको अनुभव, संचालन विधी, ऐन कानून, समयमा नवन्दा केही अलमल भयो । यो सिकाई पनि भयो । तर नयाँ परिवेशमा यति काम भएकै ठान्नुपर्छ ।
४. यो चार बर्षमा के कस्ता चुनौतीहरु भोग्नुभयो ?
पहिलो कुरा त यो व्यवस्था नयाँ थियो । हामी निर्वाचित भएर आउदा कार्यालय व्यवस्थापनको काम हुदै थियो । भर्खर कुर्ची टेवुल, दराज अन्य सामाग्रीको जोहो भईराखेको थियो । ऐन नियम केही बनेका थिएनन् । कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्न उत्तिकै सकस । यसमा पहिलो बर्ष त हामी सिक्दै गएका थियौ । प्रदेशले कानून बनाउदा हामी सहज ढंगले अघि बढ्ने थिएनौ । सामाजिक सेवालाई फरक फरक ग्रहण गर्नुपर्दछ र लागु गर्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधीहरुले पनि आफ्नो कर्तब्य र अधिकारलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्दछ । कही कर्तब्यलाई बिर्सेर अधिकारलाई खोज्ने त कही अधिकारलाई विर्सेर अर्काको अधिकारमाथी हस्तक्षेप गर्ने विषय राम्रो होईन ।
तिनै सरकारले आवश्यकता आधारमा योजना एकद्धार प्रणालीमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जनतामा पनि सकारात्मक सोच भन्दा पनि सत्तालाई फरक नजरले हेर्ने दृष्टिकोण र सबैलाई एकै खाडलमा हालेर मुल्याङ्कन गर्ने प्रवृति निकै घातक छ । जनताका असिमित आवश्यकता एकै पटक समाधान गर्न सकिने चुनौति छ । कर्मचारी जनप्रतिनिधि, जनता र ३ वटै तहका सत्ता बिचमा सहि तालमेल हुन जरुरी देखिन्छ ।
५. स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघवीच काम गराइमा के कस्तो समन्वय रह्यो ?
स्थानिय तह,प्रदेश र संघ र संगको सहकार्य हाम्रो भईराखेको नै छ । आवश्यकता अनुरुप जति हुनु पर्ने हो । त्यो हुन भने नसके पनि समन्वय सहकार्यमा हामी अगाडी बढी रहेका छौ । संघ प्रदेश सरकार सहयोग र समन्वयमा हाम्रो गाउँपालिकामा काम भईराखेका छन् ।
६. कोरोना रोकथाममा गाउँपालिकाबाट के कस्ता कामहरु भए ? दोस्रो लहरमा के तयार
गत साल कोरोना आएपछि हामीले सचेतना जगायौ । माक्स सेनिटाइजर ,साबुन वितरण गर्ने, क्वारेन्टाइन बनाउने काम भयो । आइसुलेसन, चेकजाँच । कोरोनाबाट पिडितहरुलाई राहत वितरण र नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क राख्ने काम भयो । कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरियो । दोस्रो लहरको तयारीको विषयमा भन्नु पर्दा पहिलो कुरा त जनतालाई सचेत पार्न संचार माध्याममा सुचना प्रवाह गरिरहेका छौ । सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आवश्यक औषधीको व्यवस्थापन गरिरखेका छौं । गाउँपालिकामा एउटा एम्बुलेन्स खरिदको तयारीमा छौं र दूई वटा जनताका गाडीहरुलाई अस्थायी एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौ भने एउटा टयाक्टर सामान ओसार पसारको लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौ । प्रत्येक वार्डमा एकजना कोरोना सम्बन्धी प्रतिवेदन ल्याउन कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौ । सबै स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वंय सेवकहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने । कोभिड अस्पतालमा ५ वेड बढाएर २० वेडको बनाएका छौं । अक्सिजन सिलिण्डरको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौ । गतसाल प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका ५० वेड आइसुलेसनलाई पनि व्यवस्थित गरेर काम गरेका छौ ।
७. अवको बाँकी एक बर्षभित्रमा के के कामहरु गर्ने योजना हुनेछन् ?
अबको एक वर्षभत्र जनताका आधारभुत आवश्यकता परिर्पुति गर्नेमा जोड दिइने छ । विशेष कोरोना संग लडनु परि राखेको छ । लडाईमा विजय प्राप्त गर्न सकेभरिको शक्ति लगाइने छ । बाकि रहेका र अधुरा काम पुरा गर्ने विषयमा ध्यान दिइने छ । र रणनैतिक महत्वका योजनाहरु सम्पन्न गर्न समय खर्च गर्ने छौ ।
८. तपाई निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र समस्या के कस्तो थियो ?
म निर्वाचित हुनु भन्दा अगाडी र अहिले निकै भिन्न छ । पहिले विद्यालय नभएको ठाउँमा विद्यालय छन ,स्वास्थ्य केन्द्र नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । हिजो नपाइएको औषधि पाइने भएको छ । हिजो रिक्त रहेका कर्मचारी परिपुर्ति गरिएको छ । सुत्केरी गरकउन सदरमुकाम जानु पर्दैन,पृर्णखोपको व्यवस्था भएको छ । हिजो योजना माग्न जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र सरकार धाउनु पर्दथ्यो आज त्यो छैन । गाउँ गाउँमा खानेपानीको धारा छन । हरेक गाउँमा ग्रामिण सडक पुर्याएको छ । जनताका आधारभुत आवश्यकता नजिकको सरकार संग राख्दछन र पुर्ति हुने गरेका छन ।
९. तातोपानीको विकास र समृद्धिमा थप के के गर्न आवश्यक छ ?
यो गाउँपलिका सम्भावनै सम्भावना भएको गाउँपालिका हो । जुम्ला जिल्लाको सबै प्रकारका जडीबुटि पाइने पाटन क्षेत्र यस गाउँपालिका भित्र पर्दछ । जुम्ला जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो ताल गिडिदह लगायतका २ दर्जन बढी हिमताल यसै गाउँपालिकामा छन । संसारको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा फल्ने कालिमार्सीको उत्पादन गरेको जिउला र गुरुफोक्टो पनि लाम्रा मा यहि गाउँपालिकामा नै छ । यति चिसो ठाउँमा १२ नै महिना निरन्तर तातोपानी आउने र त्यस पानीमा नुहाउँदा बाथ, छाला । नशा सम्बन्धि रोग सञ्चो हुन हजारौ दर्शनार्थीहरु आएर पुजा गर्ने बाबिरा मष्टो, सुन्दर गाउँ, मष्टो र भुरिचुला माईको मन्दिर पनि हामी संगै छ । चैत्र १२ गते पानीको मुहान फुटने र कार्तिक धान काट्ने बेला पानी सुक्ने धुरमुल पनि यहि गाउँपालिका भित्रै छ । रुखहरुको राजा सबै भन्दा पुरानो देवदारको सुनचाँदीले बाँधिएको लाम्राको द्यारा रुख पनि तातेपानी गाउँपालिका गाउँपािलका भित्र छ । संयोग देवदारको सुन्दर बगैचा बनाएर बलिराजाले पहिलो पटक राजकाज चलाएर स्थान पनि तातेपानी गाउँपालिका नै हो हजारौं लाखौ स्याउ र ओखर को बगैचा बनाउन सकिने ठाउँहरु भएको गाउँपालिका हो । धार्मिक राजनैतिक,प्राकृतिक ,कृषि,पर्यटन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ यस गाउँपालिकालाई यि माथिका वस्तुलाई व्यवस्थित मात्र सके यो गाउँपालिका समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
अन्तमा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को निति कार्यक्रम पनि ल्याएका छौ । सो कार्यक्रमले पनि केही परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।